मालामाल हुँदै टेलिकमका लगानीकर्ता
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमका सेयरधनीहरु मालामाल हुने भएका छन् । टेलिकमको संचालक समितिले आफ्ना सेयरधनीलाई ५१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव आगामी फागुन ३० गतेको वार्षिक साधारणसभामा लैजाने भएको छ । प्रस्ताव अनुसार सबैभन्दा धेरै चुक्तापूँजी भएको यो कम्पनीले ७ अर्ब ६५ करोड नगद लाभांशको रुपमा आफ्ना सेयरधनीलाई वितरण गर्नेछ �...
भारतीय रेलेमन्त्री काठमाण्डौमा, पूर्वाधार सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघ आयोजना र नेपाल सरकार तथा नेपाल युवा निर्माण व्यवसायी मञ्चको सहआयोजनमा फागुन ८ र ९ गते काठमाण्डौमा हुने नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन २०१७ मा सहभागी हुन भारतीय रेल्वे मन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभु शनिवार काठमाण्डौ आइपुुगेका छन् । मन्त्री प्रभुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट...
एनसेलको लाभकर टेलियाले तिर्नुपर्नेमा सबै एकमत, तर पहल किन भएन ?
काठमाण्डौ । नेपालमा संसदीय समितिदेखि केही कर विज्ञ समेतले एनसेलको स्वामित्वमा परिवर्तन हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व एनसेलमै स्थापित गर्ने प्रयास गरिरँदा उक्त कारोबारबाट लाभ लिएर हिँडेको एनसेलको बिक्रीकर्ता टेलियालाई भने उत्तरदायी बनाउने प्रयास कतैबाट पनि भएको छैन । स्विडिस टेलिभिजन एसभिटीले नेपालका कर अधिकृत, सरकारी...
नक्सालमा यामाहा म्युजिकको एक्सक्ल्युसिभ सोरुम
काठमाण्डौ । नेपालका लागि यामाहा म्युजिकको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु म्युजिक प्रा.लि.ले काठमाडौंको नक्सालमा नेपालकै ठूलो सांगीतिक उपकरण तथा प्रोफेसनल अडियो सिस्टमको सो रुम सुरु गरेको छ । बुधबार एक कार्यक्रमबीच नेपालको चर्चित सांगीतिक समूह १९७४ एडीले यामाहा म्युजिक सोरुमको उद्घाटन गरेको हो । नयाँ सोरुममा यामाहा म्युजिकल...
भ्यालेन्टाइन सकिएपछि भ्यालेन्टाइन अफर !
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले भ्यालेन्टाइन सकिएपछि भ्यालेन्टाइन अफर भन्दै विशेष नाइट भ्वाइस प्याकेजको अफर सार्वजनिक गरेको छ । भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा कम्पनीको जिएसएम सेवाका ग्राहकहरुका लागि २५ रुपैयाँमा २५० मिनेटको टकटाइम भएको नाइट भ्वाइस प्याकेज अफर सार्वजनिक भएको हो । यो अफर फागुन ३ गतेदेखि लागू भएको र फागुन १७ गतेसम्म रहने...
एनसेल प्रयोगकर्तालाई अब फेसबुक फ्रि !
काठमाण्डौ । एनसेलका ग्राहकहरुले अब मोबाईल डेटा सपोर्ट गर्ने मोबाईल फोनबाट लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक निःशुल्क चलाउन पाउने भएका छन् । ‘इन्टरनेट सबैका लागि’ थिम अन्तर्गत देशको अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले फेसबुकसँगको सहकार्यमा आकर्षक योजना ‘फेसबुक फ्रि’ सार्वजनिक गरेको छ । फेसबुक फ्रि योजनाअन्तर्गत...
घर बनाउँदा प्राविधिक परामर्श चाहियो ? शिवम् सिमेन्टलाई फोन गर्नुहोस्
काठमाण्डौ । निर्माणस्थलमै गएर निःशुल्क प्राविधिक परामर्श सेवा दिंदै आएको शिवम् सिमेन्टले यो सेवालाई आफ्नो उत्पादन प्रयोग गरिएका बाहेकका निर्माणमा समेत बिस्तार गरेको छ । गुणस्तरमा सम्झौता नगरौं तथा मजबुत निर्माणप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता लगायतको नारासहित संचालित प्राविधिक परामर्श तथा परीक्षण सेवा यसअघि शिवम सिमेन्ट प्रयोग गरिएका...
तयार भयो चाैधरी ग्रुपकाे भव्य शाश्वतधाम
काठमाण्डौ । नवलपरासीको दुम्कौलीस्थित सिजी औद्योगिक पार्कभित्र एक दर्जन आकर्षणसहितको विशाल शाश्वतधाम निर्माण भएको छ । सात बिघामा फैलिएको शाश्वतधामको उद्घाटन फागुन २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हुने भएको छ । उद्घाटन समारोहमा भारतको काञ्चीकामाकोटी पीठका पीठाधीश शंकराचार्य श्री जयेन्द्र सरस्वती र आर्ट अफ लिभिङ...
पोखराका डुंगा व्यवसायीलाई पशुपति पेन्ट्सको १५० थान लाइफ ज्याकेट
काठमाण्डौ । पशुपति पेन्ट्स प्रालिले बेगनास ताल डुङ्गा ब्यवसाय समितिलाई १ सय ५० थान लाइफ ज्याकेट हस्तान्तरण गरेको छ । पशुपति पेन्ट्सले आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर)अन्तर्गत समितिलाई सो ज्याकेट उपलब्ध गराएको हो । कम्पनीले २०७३ माघ २८ गतेका दिन बेगनास ताल डुङ्गा ब्यवसाय समितिलाई एक विशेष समारोह बीच लाइफ ज्याकेट...
भ्यालेनटाइनमा बिजी मलको अफर, ‘बिग डिस्काउन्ट विन्टर सेल’
काठमाण्डौ । काठमाण्डौंको गोगंबुस्थित नयाँ बसपार्कमा सञ्चालनमा आएको बिजी मलमा ‘विग सेल डिस्काउन्ट विन्टर सेल’ योजना सुरु भएको छ । १७ दिने यो योजना अवधिभर मलमा सपिङ गर्ने ग्राहकले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने कम्पनी जनाएको छ । ग्राहकलाई सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउँदै मलले प्रणय दिवस अर्थात...
तरलता अभावले भयावह रुप लिंदै, ब्याजदर बढ्दा उद्योगहरु संकटमा
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ । बैकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्याले भयावह रुप लिनसक्ने संकेत देखिएको छ । लगानीयोग्य रकम अभावका कारण ब्याजदर वृद्धिको अस्वभाविक चलखेल भइरहेको छ भने चाहेको बेलामा ऋण नपाउने समस्याले समेत लगानीकर्तालाई पिरोलेको छ । तरलता अभावको समस्या समाधानमा सरकार र राष्ट्रबैंक गम्भीर नबन्दा लामो समयदेखि...
आजदेखि सबै सिरिजका आइफोनमा फोरजी सेवा चल्ने
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले सञ्चालन गरिरहेको फोरजी सेवा मंगलबारदेखि सबै सेरिजका आइफोन सेटहरुमा समेत चल्न थालेको छ । यसअघि फोरजी सेवा आइफोनको फाइभ सेरिजमा मात्र चल्थ्यो । नेपाल टेलिकमका अनुसार मंगलबारदेखि आइफोन सिक्स, सिक्स प्लस, सेभेन र सेभेन प्लस सेरिजका सेटहरुमा समेत यो सेवा चल्ने प्रष्ट पारेको हो । नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा...